Miswe 3.2 inowanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Vanoda kuchengetedzwa kwemakomputa akaendeswa kune akanyanyisa vane mhanza. Miswe, Edward Snowden's yaanofarira mashandiro, watove neshanduro nyowani inowanikwa. Uyu ndiwo Miswe 3.2, kugoverwa kunoenderera kubheja pane chengetedzo pakunaka kwazvo.
Miswe 3.2 pakati pezvimwe zvinhu, wagadzirisa yako Kernel kuti ive shanduro 4.12, zvichidaro zvichiwedzera kuenderana nezvinhu zvitsva zvehardware, pamwe nekuona iri kumusoro-uye nekudaro yakachengeteka rutsigiro.
Zvisinei, ruzivo rwayo rukuru ndiko kuwedzerwa kwekugona kwekubatanidza kune internet kuburikidza nePPPoE uye nharembozha yekubatanidza kana Dial Up. Uye zvakare, matambudziko akaunzwa naFlorence pa-screen keyboard akagadziriswa kana kuti, Florence akatsiviwa neGnome on-screen keyboard, iyo isina kana dambudziko.
Pakupedzisira, mapurogiramu ese akagadziridzwa kune yavo yazvino vhezheni, seye Thunderbird tsamba mutengi, pamusoro pekugadzirisa zvimwe zvipembenene, senge imwe inoenderana nekubata makiyi epachivande. Chinhu chega chinokanganisa ndechekuti neese maficha maficha, iyo sisitimu yekushandisa inofanirwa kumhanyisa pendrive inokwana 8 GB, panzvimbo ye4 GB yeshanduro dzapfuura. Nekudaro, ini handifunge kuti ichi chichava chinetso pakati pa2017.
Nedzidzo iyi, hapana mubvunzo Miswe inoramba iri imwe yenzvimbo dzakachengetedzeka kwazvo dzekushanda pasi rose kana chinangwa chako chiri kusevha internet pasina kuonekwa. Miswe inozivikanwa nekushandisa netiweki dzakadai seTor kana freenet, network dzewebhu dzinowanikwa kuburikidza neusingazivikanwe IP uye ayo maratidziro asina kunyoreswa neinjini dzekutsvaga.
Kunyangwe paine mukurumbira wakashata wemambure aya, kunyanya nekuda kwevanhu vanovashandisa zvisiri pamutemoVashoma vakachinjira kune iyi mhando yehurongwa, kuitira kudzivirira kudzivirira kwakanyanya nehurumende nemakambani paInternet. Vanhu ava havaite chero chinhu chisiri pamutemo, asi havadi kudzorwa, saka vanoshandisa masystem anoshanda seMiswe kuti vave vasina kudzora.
Kana iwe uchida kurodha Miswe, unogona kuzviita kubva kune yako peji yepamutemo, umo mune zvakare dzidzo yakakwana iyo yaunofanira kutevedzera kana iwe usiri kuda kupotsa chero ruzivo nezve mashandiro ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Miswe 3.2 inowanikwa